Semalt Expert Anotsanangura Maitiro Akukanda A Website Nekombiko Yakanaka
Kune deta yakawandisa inowanzo kune rumwe rutivi rwe HTML. Kumashini yemakombiyuta, pepa rebhundaneti inongova musanganiswa wezviratidzo, zvinyorwa zvinyorwa, uye white space. Chinhu chaiyo chatinoenda kuti tive pane peji rewebhu chinongogumirira nenzira inogona kuverengwa kwatiri. Ikombiyuta inotsanangura zvinhu izvi se HTML tags. Chimwe chinhu chinosiyanisa code yakasvibiswa kubva kune data yatinoona ipurogiramu, mune iyi, mapurisa edu - curso tco alto nivel. Mamwe mawebsite akaita se scrapers angashandisa pfungwa iyi kuti aparadze webhusaiti yehutori uye echengetedze kuti inoshandiswa gare gare.
Mutauro wakajeka, kana iwe ukazarura dhidhi ye HTML kana faira rekutsvaga peji yewebhu, zvingaita kuti uwane zvinyorwa zvinowanikwa pane imwe nzvimbo yewebhu. Iyi ruzivo rwaizova pane imwe nzvimbo yakadzika pamwe chete nenhamba yakawanda. Zvose izvi zvinosanganisira kubata nehuwandu nenzira isina kugadziriswa. Zvisinei, zvinokwanisika kukwanisa kuronga ruzivo urwu nenzira yakarongeka uye kugadzirisa zvikamu zvinobatsira kubva mumutsetse wose.
Muzviitiko zvakawanda, zvipfeko hazviiti basa ravo kuti dziwane faira ye HTML. Pane kazhinji kuguma kunobatsira iyo munhu wose anoedza kusvika. Somuenzaniso, vanhu vanoita mamwe mabasa ekutengeserana kwepa internet vangada kuisa tsvimbo dzakasiyana-siyana semurairo-f kuwana ruzivo kubva pawebhu. Kuti upedze basa iri pamapeji akawanda, ungada rubatsiro uye kwete kungova nemunhu. Nzvimbo dzeWebra scrapers idzi idzi dzinogona kuparadzira webhusaiti dzine mapeji anopfuura mamiriyoni munyaya yeawa. Zvose izvi zvinoda purogiramu yakajeka-pfungwa. Nemamwe mapurogiramu emitauro yakadai sePython, vashandisi vanogona kukodha vamwe vakwegura vanogona kuparadzira dhesaiti yepaiti uye vachiiisa pane imwe nzvimbo.
Kucheka kungangove nzira ine ngozi kune mamwe mawebsite. Kune zvakawanda zvinotambudza zvinotarisana nekukodzera kwekucheka. Chokutanga pane zvose, vamwe vanhu vanofunga kuti data yavo yakavanzika uye yakavanzika. Izvi zvinoreva kuti nyaya dzekodzero, pamwe chete nekudengenyeka kwezvinhu zvakasiyana-siyana, zvinogona kuitika kana chiitiko chekuvhara. Mune zvimwe zviitiko, vanhu vanotora imwe webhusaiti yekushandisa pasina iko. Somuenzaniso, munguva yapfuura yapfuura, pakanga paine nyaya ye Craigslist yewebsite inonzi 3Taps. Iyi yepaiti yakanga ichichera webhutiro yehutano uye ichidzokororazve imba yezvinyorwa kune zvikamu zvakasarudzwa. Vakazogara ne 3Taps vachibhadhara madhora 1 000 000 kune avo vekare nzvimbo.
BS igadziriro yezvishandiso (Python Language) yakadai semutambo kana purogiramu. Iwe unogona kushandisa Mushonga Wakanaka kuti unyore webhusaiti kubva pamapeji ewebhu pawebhu. Zvinokwanisika kuparadzira nzvimbo uye kuwana dhidhiyo mu fomu yakarongeka inofanana neyakabuda. Iwe unogona kutarisa URL uye woisa imwe purogiramu inosanganisira kushambadzira kwatakabva. Muna BS, unogona kutengesa mumhando dzakasiyana-siyana dzakadai saXML. Kuti uitange, unofanirwa kuisa shanduro yakanaka ye BS uye uchitanga nemashoma ezvinyorwa zvePython. Programming zivo inokosha pano.